Dagaalka Beled Xaawo oo kala qaybsanaan ka dhex dhaliyay bulshada Soomaaliyeed | Dhacdo
Bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaabooyin iska soo horjeeda uga hadlaysa dagaalka Degmada Beled Xaawo, ay ku qaadeen Ciidamada Jubbaland.
Bulshada qaybteed ayaa dagaalka u aragta mid ay soo abaabushay Dowladda Kenya, haddii Ciidamada Jubbaland ay iska soo abaabuleen dhanka Mandhera. Qoraalada ay barraha bulshada ku soo qorayaan ayaad ka dheehan kartaa ereyada kul kulul ee ay ku weerarayaan Kenya iyo kuwa taabacsanba.
Kuwa kale ee saluugsan hannaanka maamuleed ee Dowladda Federaalka waxay ku doodayaan inaanu dagaal ka dhici lahayn Beled Xaawo, haddii aysan sanadkii hore ku duuli lahayn dowladda.
Dadka dhaliilaya Madaxweyne Farmaajo waxay ku eedeynayaan in uu wiilashii Soomaaliyeed isku dul baabi’inayo, isagoo markaasi dano siyaasadeed ka leh.
Waxaa kaloo arkeysaa dad si weyn u boggaadinaya weerarka Beled Xaawo iyo kuwo kale, oo si qiireysan ammaan iyo boggaadin ugala duldhacaya Ciidamada Dowladda.
Waxaase jira kuwo kale oo soo qoraya in labada dhinacba ciidamada ka dhimanaya ay yihiin askartii dalka, khasaara walba oo kala gaarana uu yahay mid si guud u soo gaaray dalka iyo dadka.
Dowladda Somaliya ayaa sanadkii hore ee 2020 Maamulka Jubbaland kala wareegtay gacan ku haynta Degmooyinka Gobolka Gedo, ka dib doorashadii lagu murmay ee 22-kii bishii August ee sanadkii 2019 lagu qabtay Magaalada Kismaayo, dib-na loogu soo doortay Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Inta laga warqabo waxaa dagaalka ku dhintay dhawr iyo toban askari oo labada dhinac ah iyo sideed qof oo shacabka reer Beled Xaawo ka mid ah. Rayidka dagaalka ku dhintay waxay u badan yihiin kuwo ay madaafiicda ku dileen guryahooda.